नेपालगन्ज : तीन प्रदेशको शैक्षिक हब - शिक्षा - साप्ताहिक
- जनक नेपाल, ठाकुरसिंह थारु
काठमाडौंबाहिर चलनचल्तीका नयाँ कोर्स छिटो भित्रिने प्रमुख सहरमध्ये नेपालगन्ज पनि एक हो । यहाँ बर्सेनि नयाँ विषय र कलेजहरू थपिने क्रम जारी छ । कुनै बेला मुस्किलले नर्सिङ कलेज मात्र देखिने यो सहरमा अहिले टेक्निकल कलेजहरूको बाढी नै आएको छ । विद्यार्थीले आफूले चाहेको विषय रोजेको कलेजमा पढ्ने वातावरण तयार भएको छ । एक दशकअघिसम्म नेपालगन्जमा एकाध मात्र टेक्निकल कलेज थिए । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यार्थीहरू नेपालगन्जभन्दा बाहिर जानुपर्ने बाध्यता थियो ।
त्यही नेपालगन्जमा अहिले चिकित्सा शास्त्र अध्ययनका लागि नेपालीभन्दा भारतीय तथा श्रीलंकन विद्यार्थी बढी आउन थालेका छन् । नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले हरेक वर्ष १ सय ५० जनालाई एमबीबीएस गराउ‘दै आएको छ । नेपालगन्ज नेपालका लागि मात्र होइन, भारतीय विद्यार्थीहरूका लागि पनि शैक्षिक हबका रूपमा विस्तार भैरहेको छ । यसलाई अझ विस्तार गर्न सरकारी स्तरबाटै टेक्निकल कलेज खुल्नुपर्छ, शिक्षण अस्पताल नेपालगन्जका प्रबन्ध/निर्देशक डा. सुरेशकुमार कनौडिया भन्छन्– नेपालगन्जमा नयाँ विषय पढाइ हुने कलेजहरू धमाधम स्थापना भैरहेका छन् । यसले विद्यार्थीहरूको मागसमेत पूरा गर्दै आएको छ । नेपालगन्जमा प्रदेश नम्बर ५, ६ र ७ का युवा विद्यार्थीहरूको आकर्षण छ । यसले उनीहरूको सपना पूरा भएको छ । भारतमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरू यहीं रोकिएका छन् ।
नेपालगन्जमा व्यवस्थापन, बीबीएस, आईटी, सामाजिक कार्य एवं होटल म्यानेजमेन्टका कलेजहरू स्थापना भैसकेका छन् । नर्सिङ कलेजमा विद्यार्थीको चाप उत्तिकै छ । यो क्षेत्रकै सबैभन्दा पुरानो महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा भने पुरानै विषय पढाइ हुने गरेको छ । त्यहाँ इतिहास, भूगोल, नेपाली, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन तथा कानुन संकाय अध्यापन हुन्छ । कानुन संकायको एलएलबीसम्म तथा अन्य विषयमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गर्ने व्यवस्था यहाँ छ ।
अनेरास्ववियु बाँकेका अध्यक्ष मोहित शाहले नेपालगन्जमा सबै विषय पढाइ हुने कलेजहरू खुलिसकेको बताए । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा पुराना विषयको स्नातकोत्तरसम्म पढाइ हुन्छ । अन्य कलेजमा युवाहरूले रोजेका विषयमा पढाइ हुने गरेको छ, शाह भन्छन्– अहिले चल्तीका सबै विषयको पढाई यही हुने गरेको छ । राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक डा. जनार्दन आचार्यले नेपालगन्जमा करिव सबै विषयका पढाइ हुने कलेजहरू खुलिसकेकाले शैक्षिक हबका रूपमा विकास भैरहेको बताए । यद्यपि भौतिक संरचना एवं गुणस्तरमा थप जोड दिनुपर्ने आचार्यको सुझाव छ । आचार्य भन्छन्– गुणस्तरीय पढाइ हुने हो भने नेपालगन्ज शैक्षिक हबका रूपमा परिचित हुनसक्छ ।
कलेज अफ म्यानेजमेन्ट इन्जिनियरिङ कलेजमा स्नातक तहको पढाइ हुने गरेको छ । यो कलेज पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालनमा आएको हो । यसअघि इन्जिनियर पढ्न काठमाडौं, पोखरा र भारतका विद्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता थियो । कलेज अफ एलाइड हेल्थ साइन्समा एचए, नर्सिङ, ओभरसियर, ल्याब टेक्निसयन आदि विषयमा पढाइ हुने गरेको छ । विषय पढ्न चाहने विद्यार्थीले नेपालगन्जमै पढ्न पाएका छन् । इच्छाअनुसारको पढाइका लागि मुलुकका सबैजसो स्थानबाट विद्यार्थी आउने गरेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नर्सिङ कलेजमा बीएसस्सी नर्सिङसम्मको पढाइ हुने गरेको छ । त्यसबाहेकका निजी नर्सिङ कलेजका कारण नेपालगन्ज नर्सिङ पढाइका लागि अर्को आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । त्यस्तै, १० कक्षासम्म अध्ययन गरेका युवाहरूका लागि सीप विकास गर्न नेपालगन्जमै भेरी प्राविधिक शिक्षालय छ । जहाँ इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, ब्युटिसियन आदि प्राविधिक विषय अध्यापन हुन्छ । नेपालगन्ज टेक्निकल कलेजमा सिएमए, ओभरसियर, नापी (जग्गा नापजाँच) आदि विषय पढ्न सकिन्छ । हरेक वर्ष सयभन्दा बढी विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि नेपालगन्ज आइपुग्छन् । कैलपाल अस्पतालमा एचए, मध्यपश्चिम प्राविधिक शिक्षालयमा डिप्लोमा इन फार्मेसी आदि विषय अध्यापन हुन्छन् ।
एकै ठाउँमा पारस र हिमानी